Accueil > Gazetin'ny nosy > Lalàm-pifidianana vaovao: Hihazakazahan’ny governemanta mafy
Lalàm-pifidianana vaovao: Hihazakazahan’ny governemanta mafy
Efa mitodika any amin’ny fifidianana filoham-pirenena avokoa izao ny etamazaoro pôlitika rehetra eto amintsika ankehitriny. Maro no efa miandry ny hamoahan’ny governemanta ny tetiandrom-pifidianana mba ahafahan’izy ireo miomana, fa eo ihany koa ny famoahan’ny governemanta ampahibemaso ny lalàm-pifidianana vaovao. Raha ny filazan’ny mpitondra, ary izay no tokony ho lojika, dia rehefa mahazo ny fankatoavan’ny parlemanta ny lalàm-pifidianana vao hamoaka ny datim-pifidianana ny fitondram-panjakana. Mihazakazaka mafy moa ankehitriny ny governemanta tarihin’ingahy Mahafaly Solonandrasana Olivier, amin’ny famolavolana ireo rijan-teny ao anatin’ny lalàm-pifidianana izay heverin’izy ireo fa mbola mila fanitsiana. “Miasa andro aman’alina mihintsy ankehitriny ny governemanta amin’ny fandinihana ireo rijan-teny vitsivitsy farany izay mbola tokony hasiam-panitsiana ao anatin’ilay lalàna mifehy ny fifidianana vaovao. Efa nangonina daholo ny hevitr’ireo antoko pôlitika sy firaisamonim-pirenena ka tsy maintsy hatao mifanaraka amin’izay io lalàm-pifidianana vaovao io mba ho eken’ny rehetra ny fitsipi-dalao entina amin’ny fifidianana. Etsy ankilan’izay, misy ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena eo amin’izay resaka fifidianana izay ka miezaka ny governemanta mba hampifanaraka ny lalàm-pifidianana vaovao amin’izay fenitra iraisam-pirenena izay”, hoy ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, omaly, teny amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo. Marihana fa omaly dia nisy ny filankevitra ny governemanta manokana notanterahina teny Mahazoarivo ka anisan’ny nisongadina tamin’izany ny fandinihana ity lalàm-pifidianana vaovao ity. Ny praiminisitra izay nanambara ihany fa tsy ho ela dia ho haroso eny amin’ny parlemanta io lalàna io, mety ho amin’ity volana febroary ity ihany. Tsara ny manamarika fa 15 andro ao aorian’ny fahatongavan’ilay volavolan-dalàna eny anivon’ny birao maharitra ny Antenimierampirenena vao afaka miroso amin’ny fandinihana sy fankatoavana azy ireo solombavambahoaka. Raha ny voalazan’ny lalàmpanorenana dia 12 andro ihany raha ela indrindra ny faharetan’ny fivoriana tsy ara-potoana ho an’ireo parlemanta roa misy eto amintsika. Andrasana noho izany ny fivoahan’ny lalàm-pifidianana vaovao afaka andro vitsy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe: “ho eken’ireo antoko pôlitika ivelan’ny fitondrana izay handray anjara amin’ny fifidianana ve io lalàm-pifidianana vaovao io sa tsia?” Raha sanatria mantsy koa ho tsipahan’izy ireo izany kanefa ny fitondrana hampandany azy eny anivon’ny parlemanta dia azo antoka fa tsy hitondra filaminana eto amin’ny firenena mihitsy ny fifidianana ho tanterahina amin’ny faran’ny taona.
Mantasoa: Hihiboka hanao inona ny governemanta?
Androany talata sy rahampitso alarobia faha 13 febroary 2018 dia hihiboka any Mantasoa ny mpikambana ao amin’ny governemanta sy ny mpitondra miaraka aminy ary ny mpikambana ao amin’ny HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara) izay lohandohany.
Handinika ny raharaham-pirenena mazava ho azy no hatao amin’izany. Mahakasika ny fifidianana indrindra indrindra koa. Raha toa ka halefa eny amin’ny Antenimierampirenena izany ny lalàna momba ny fifidianana atsy ho atsy dia tsy maintsy izany no hanaovana ity fihibohana ity.
Mazana nefa dia tetika hahazoan-toerana na hifikirana amin’ny fitondrana no ataon’ny mpanao pôlitika amin’izany. Mazava dia mazava ny raharaha eto Madagasikara fa miady mafy ny fitondrana ny hijanonany amin’ny toerana ka tsy maintsy ny tetika hahazoana mampihatra izany amin’ny fifidianana hoavy izao no isan’ny zava-dehibe amin’ity fihibohana ity.
Mantasoa moa dia malaza ho fihibohan’ny mpitondra sahirana mitondra an’i Madagasikara hatramin’izao ka hohitantsika eo ny tena marina amin’izao raharaha izao.